कर्मचारी सञ्चय कोषको साढे दुई अर्बको परियोजना | आर्थिक अभियान
कर्मचारी सञ्चय कोषको साढे दुई अर्बको परियोजना
कर्मचारी सञ्चय कोषले पाँच ठूला भवन निर्माण गर्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीन र उपत्यकाबाहिर दुई ठाउँमा निर्माण गरिने ती भवनको कुल लागत करीब साढे तीन अर्ब हुने कोषका प्रमुख प्रशासक डा. रमेशकुमार भट्टराईले बताएका छन् । ‘पाँचवटै निर्माण परियोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन्,’ उनले भने । पाँचमध्ये तीनवटा प्रोजेक्ट सञ्चयकर्ताहरूका अपार्टमेन्ट तथा आवास हुने जानकारी भट्टराईले अभियानलाई दिए । यसमा काठमाडौंको टेकुमा रू. १ अर्बको लगानीमा करिब ५ सय अपार्टमेन्टको बृहत् परियोजना निर्माण हुने भएको छ । यसका लागि हाल ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
सुनसरीको इटहरीमा २५ कट्ठा जमीनमा कोषले सञ्चयकर्ताका लागि अपार्टमेन्टका साथै एक सुविधासम्पन्न डिपार्टमेन्टल स्टोर निर्माण गर्ने भएको छ । यसको लागत करीब ५० करोड रुपैयाँ हुने बताइएको छ । त्यस्तै, अनुमानित लागत रू. ५० करोडमै चितवनमा कोषले १ सय ३० वटा घर (छुट्टाछुट्टै आवास) निर्माणको तयारी गरेको छ । यसका लागि ठेकेदारसँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जानकारी दिएको छ ।
वर्ष ६ अंक २, आइतवार २० भदौ, २०६७